PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: October 2012
အကြမ်းဖက်မှု ပဋိပက္ခ ဖြစ်စဉ်များမှ လက်နက်ငယ် (၁၈၀)လက...
အစိုးရနဲ့ KIO တို့ အကြား ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွ...
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးသည့်ရက်တွင် တိုက်ပွဲများ ဆက...
တအာင်းပလောင် ဒေသအတွင်း ဘိန်းပပျောက်ရေး TNLA လှုပ်ရှ...
KIO ဘက်က အစဉ်တစိုက် တောင်းဆိုနေတဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေး...
အမေရိကန်အရှေ့ ပိုင်းသို့ ကြီးမားသော စန္ဒီဟာရီကိန်း ...
ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီနှင့် KIO ရေ...
TNLA မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖက်ရေး ခရီးစဉ်
အိမ်ရာဝင်းအတွင်း ဖွင့်ထားသော ဟိုတယ်ကြောင့် အနီးရှိ...
မြန်မာလူမျိုးတို၏ ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင် (သူတို.ပြောတာ...
ရခိုင်အရေး ခေါင်းအေးအေး အဖြေရှာနိုင်ရင် အောင်မြင်န...
မိုးထိမိုးမိ ရွှေလုပ်သားများ အရေး ယခုတိုင် ပြေလည်မှု...
ဆေးရုံရောက် သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရ သွေးချင်း ညီအကို ရခိုင်...
ရခိုင်- ရွာလုံးကျွတ် မီးရှို့မှုများရှိကြောင်း မြန...
တရုတ် သံရုံး၏ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ခြေရှုပ်မှုများ - အ...
တပ်ပေါင်းစုနှင့်မြန်မာစစ်တပ် တိုက်ပွဲတွင် မြန်မာတပ...
ပုသိမ်မြို့နယ်မှ NlD ပါတီဝင် ၁၃၂ဦးနုတ်ထွက်ပြီး အမ...
ရုံးပတီသီးကပေးတဲ့ သူမတူတဲ့ အစွမ်းများ
အမေရိကန် အစိုးရအဖွဲ့ ကရင်နီပြည်နယ်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းေ...
OIC ဇာတ်လမ်း ပြီးသွားပြီလို့ မထင်ကြပါနဲ့ဦး။
ထုတ်ပယ်ခံရသည့် KNU စစ်ဦးစီးချုပ်ကို ရာထူးပြန်အပ်
တရုတ်ဆရာမတစ်ဦးက သူငယ်တန်း ကလေးငယ်များကို ထပ်တလဲလဲ...
ဘရာဇီးကျောင်းသူ အပျိုစင် လေလံပွဲမှာ ဂျပန် အမျိုးသာ...
တအာင်း မိဘပြည်သူ ညီအကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ …
မြန်မာပြည် အကြွေးဘယ်လောက် ရှိလဲ
ကျောက်ဖြူမြို့ မီးရှို့ပြီး ထွက်းပြေး တိမ်းရှောင်နေ...
ဆန်ကြမ်းတစ်ဘူး ငါးရာနှင့် မြောက်ဖျားသားများ ဘ၀
UNFC တိုကျို ခရီးစဉ်၌ တအာင်းပလောင်အမျိုးသားများ ကိ...
ရန်ကုန် ယဉ်ကြော ပိတ်ဆို့မှုပြဿနာ ဂျပန်ပါဝင်ကူညီဆောင...
ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းအား ကိုယ်ထိလက်ရောက် စော်ကားခဲ့မှုအပေါ် ...
ထုတ်ပယ်ခံရသူများကို မူလနေရာ ပြန်ပေးရေး ကေအန်ယူ ဆွေ...
"နိုင်ငံရေးအရ မလိုလားတဲ့သူတွေကို ဆင်ခြေပေးပြီး ဖမ်...
ပုဂံရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု့ အမွေအနှစ်တွေကို စနစ်တက...
ပြည်သူ့ လွတ်တော် တရား ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ...
အလောင်းများကို ထုတ်ပေးရန် စစ်သားများက တောင်းနေကြော...
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နေပြည်တော် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တ...
နိုင်ငံ တကာ အင်တာနက် အလှမယ်ဆု လက်ခံ
"လွှတ်တော်ကို အပြည့်အ၀အားကိုလို့မရတဲ့အချိန်မှာ လွှတ်...
အမေရိကပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့ ရှိ -OIC- ရုံးချ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ လုပ်ငန်းများအား ကန့် သတ်ရန် တ...
လကမ္ဘာလမ်းပေါ်က အလှူအတန်း မရက်ရောနိုင်ပါဗျာ
ဂျပန်သတင်းဌာနများမှ UNFC ကိုယ်စားလှယ်များ ဆွေးနွေး...
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမျာ...
"ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဆာကားအိမြို့ ငြိမ်းချမ်းရေး...
ပလောင်ဒေသအား ထပ်မံထိုးစစ်ဆင်ရန် စကခမှူး ကိုယ်တိုင်...
ရာနှုန်းပြည့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနှင့် ပညာသင်ဆု...
(၄၄)ရက်အတွင်း KIA,နှင့်တိုက်ပွဲပေါင်း (၁၅၀)ကျော်ဖြစ်
ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်လ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစြု...
“တအာင်းဒေသငြိမ်းချမ်းရေး နှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ပြည်သူလ...
အကြမ်းဖက်မှု ပဋိပက္ခ ဖြစ်စဉ်များမှ လက်နက်ငယ် (၁၈၀)လက် သိမ်းဆည်းရမိခဲ့
၃။ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခု အကြားရှိ ပဋိပက္ခများသည် သာမန်ဆူပူလှုပ်ရှားမှု ဖြစ်စဉ်များမှ လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက်မှု အခြေအနေသို့ ကူးပြောင်းတော့မည့် လက္ခဏာ အသွင်ဆောင်ကာ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုပင် လက်နက်ဖြင့် ရန်မူခြိမ်းခြောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။ အကြမ်းဖက်မှု ပဋိပက္ခ
အစိုးရနဲ့ KIO တို့ အကြား ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲရုပ်သံ
အစိုးရတပ်ရဲ့(၅)မိုင်လောက် အနည်းဆုံး ပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ တာဝေးပစ် အမြောက်ကြီး အသုံးပြုပြီးတော့ နေ့စဉ်ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်နေပြီး.. ထိုးစစ်မဆင်ပါဘူး ခုခံကာကွယ်စစ်လောက်ကိုသာ လုပ်နေတာပါဆိုတဲ့ ဟာက သဘာဝမကျတဲ့အပြင် အဓိပ္ပါယ်မရှိပါဘူး.....ကျနော်တို့ လက်မခံနိုင်ပါဘူး...........( ဦးလဖိုင်လ)
အစိုးရနဲ့ KIO တို့ အကြား ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ က စတင် ဆွေးနွေး နေကြပီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ဦးစည်သူဇေယျ တင်ဆက်ထားပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးသည့်ရက်တွင် တိုက်ပွဲများ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေဆဲ
နှစ်ဖက် အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များ ရွှေလီ တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆွေးနွေးနေသော်လည်း ကချင်ဒေသ နှင့် ရှမ်းမြောက် ဘက်တွင် တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်သည်။
မနေ့ က အောက်တိုဘာ(၃၀)ရက် နှစ်ဖက် ကိုယ်စားလှယ်များ ရွှေလီမြို့ တွင် တွေ့ ဆုံနေစဉ်အတွင်း မြန်မာ အစိုးရတပ် ခမရ(၃၂၁) စစ်ကြောင်း အင်အား (၁၀၀)ခန့် က စစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ်နေစဉ် ကေအိုင်အေ ပြည်သူ့ စစ်တပ်ဖွဲ့ ဝင်များ နှင့် ဆနီတူကောင် ( Sanitu Kawng ) နှင့် ဂျာပူကျေးရွာ အနီး တွင် ထိတွေ့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ တိုက်ပွဲမှာ ပြင်းထန်ခဲ့ပြီး မြန်မာ
တအာင်းပလောင် ဒေသအတွင်း ဘိန်းပပျောက်ရေး TNLA လှုပ်ရှားမှု ရုပ်သံသတင်း
တအာင် (ပလောင်) အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (TNLA)မှ ပလောင်ဒေသအတွင်း ဘိန်းပပေါက်ရေး လှုပ်ရှားမှု
Lway Tea Flower, အင်တာနက် စာမျက်နှာသတင်းမှ
ပြည်ထောင်စု စစ်စစ်မူကို လက်ခံကြပြီဆိုရင် ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်း မဝေးတော့ပါပြီ
.....ဖတ်သင့်တဲ့ ဆောင်းပါးကောင်းတစ်ပုဒ်ပါ ....
ယခုအပတ်ထုတ် ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်ပါ ဆရာ မောင်ဝံသ (ဓါတ်ပုံ - မိုးမခ)
အခုလောလောဆယ်မှာ ]အဆိုးထဲက အကောင်း}ဆိုသလို တစ်ဖက်မှာ သေမိန့်ကျရောဂါတစ်ခုအဖြစ် အများနားလည်ထားကြတဲ့ ကင်ဆာရောဂါနဲ့ စစ်ပွဲဆင်နွှဲနေရပေမယ့် အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ အရင်ကနဲ့စာရင် အချိန်ပိုရသလိုဖြစ်နေတာကြောင့် စာတွေ ပိုပြီး ဖတ်ဖြစ်နေတယ်ဗျ။ အထူးသဖြင့် ဒီကနေ့ စာဖတ်သူအများစုကို သူ့ထက်ငါကောင်း အပြိုင်အဆိုင် စည်းရုံးဆွဲဆောင်နေကြတဲ့ ဂျာနယ် တွေကို ပိုပြီးတော့လည်း များများ၊ ပိုပြီးတော့လည်း စူးစူးနစ်နစ် ဖတ်ဖြစ်နေမိတယ်ဗျာ။
အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဂျာနယ်ပါ သတင်း ဆောင်းပါး တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွေထဲက ကျွန်တော့်အာရုံမှာ လာငြိ တာတွေထဲက တစ်ခုကတေွာှ့န လသငခန ဂျာနယ်ထဲက ရှမ်းအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥကဌ ဦးခွန်ထွန်းဦးရဲ့စကား တစ်ခွန်း ဖြစ်တယ်ဗျ။ ဂျာနယ်ထဲမှာပါတဲ့ သူ့စကားက ဒီလိုဗျာ။ ]]လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်လောက်က သမတရုံး ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းက ဖက်ဒရယ်ဆိုတာ ပြည်ထောင်စုမူ လို့ လက်ခံလာသလို နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ သတင်းဂျာနယ်တွေမှာလည်း ဖယ်ဒရယ်စနစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခွဲထွက်ရေးမဟုတ်ဆိုတာကို ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် သိရှိလာတယ်။ အဘိုး၊ အဖေနဲ့ အန်ကယ်ကိုယ်တိုင် ထောင်ကျခံပြီး ဖယ်ဒရယ်ကို နားလည်လက်ခံလာအောင် ကြိုးပမ်းရကျိုးနပ်တယ်}}လို့ ပြောလိုက်တာဗျ။
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေအရ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ တက်လာတဲ့ အစိုးရလက်ထက်မှာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရေးအတွက် အစိုးရကို ကိုယ် စားပြုပြီး စွမ်းစွမ်းတမံ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ ယခင် မီးရထား ၀န်ကြီး၊ ယခု သမတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းဟာ ယခင် စစ်အစိုးရ လက်ထက်က တိုင်းမှူးအဆင့်အထိ တာဝန်ယူခဲ့ဖူးတဲ့ စစ်အရာရှိ ဟောင်းကြီးတစ်ဦး ဖြစ်တယ်ဗျ။ အဲဒီတော့ ဦးခွန်ထွန်းဦးစကားအရ ဖယ်ဒရယ်မူကို ခွဲထွက်ရေးမူအဖြစ် နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်လောက် သဘောထားလာခဲ့ကြတဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်လောက်ကမှ အဲဒီအမြင်ကို စွန့်လွှတ်လိုက်တဲ့ သဘောလို့ ယူဆရမှာ ဖြစ်တယ်ဗျ။
ဖယ်ဒရယ်မူဆိုတာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ် တစ်ဆစ်ချိုး ကွေ့သွားခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းမှာ အဓိက
Happy Smile အင်တာနက်စာမျက်နှာမှ
KIO ဘက်က အစဉ်တစိုက် တောင်းဆိုနေတဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ ကျင်းပဖို့ အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လိုက်လျော (DVB အင်တာဗျူး)
ကေအိုင်အို ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင် ဗိုလ်မှူးကြီး ဂျီးနောင်
(Jade Land ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမှ ယူပါသည်)
အပြည့်အစုံသို့...ပြန်ခေါက်ထားပါ... Copy from - drlunswe
အမေရိကန်အရှေ့ ပိုင်းသို့ ကြီးမားသော စန္ဒီဟာရီကိန်း ရောက်ရှိ
အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက် ညက စပြီး Sandy (စန္ဒီ) အမည်ရ ဟာရီကိန်းအမျိုးအစားတစ်ခုက အမေရိကန် နိုင်ငံ အရှေ့ ဘက်ပိုင်းသို့ ဦးတည် တိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်နာရီ ၈၅ အထက်မှာ ရှိပြီး အိမ်များပျက်ဆီးခြင်း၊ လမ်းရေနှစ်မြှုပ်ခြင်းများ ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ကြိုတင် သတိပေးချက် အချိန်မှီပေးထားတွက် ရွေ့ ပြောင်းမှု များ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အရှေ့ ဘက် ကမ်းရိုးတန်း တစ်လျှောက်က ပြည်သူပေါင်းထောင်ချီကို ရွေ့ ပြောင်းထား ပါတယ်။ ပြည်သူပေါင်း သန်းချီလည်း လျှပ်စစ် မီးပြတ်တောက်ပြီး လိုအပ်ပါက ရွေ့ ပြောင်းရမယ့် အနေ အထားမှာ ရှိပါတယ်။ နယူးယောက်မြို့ ရှိ မြေနိမ့်ပိုင်း မှာ နေထိုင်သူများအား ထွက်ခွာရန် အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
နယူးဂျာဆီပြည်နယ်၊ Brooklyn ခရိုင်၊ Manhattan ခရိုင်များသို့လည်း ရေများ ရောက်ရှိပြီး လူသေဆုံးမှုလည်း ရှိတယ်လုိ့ ဆိုပါတယ်။ အမေရိကန်၏ အကြီးမားဆုံးနဲ့ အကျယ်ပြန့်ဆုံး ဟာရီကိန်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး နယူးယောက်က စတော့ ရှယ်ယာဈေးကွက်ကိုပါ ပိတ်ပင်ခဲ့ရပါ တယ်။ နေရာ တော်တော်များများမှာ ရေနှစ်မြှုပ်မှု ဖြစ်ပေါ်ပြီး အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေးများ ပြုလုပ်လျက် ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Copy from - International news for myanmar
ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မင်းကလည်း “ဘယ်သူမှားတယ် ဘယ်သူ မှန်တယ် ဆွေးနွေးပြီး စစ်ရေးကို ဖြေလျှော့ဖို့ လိုတယ်" ဟု ဆိုသည်။
ထို့အတွက် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အောက်ခြေတွင် သံသယ အမှန်ဖြစ်သော်လည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေး၍ စစ်ရေး လျှော့ချရန် လိုအပ်ကြောင်း ထပ်မံ ပြောကြားလိုက်သည်။
မုံဂျီဈေးအနီးတွင် တိုက်ပွဲဖြစ် ဗမာစစ်သား (၂) ဦးကျ
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကေအိုင်အေတပ်မဟာ (၄) အုပ်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်သော မုံဂျီးဈေးအနီးတွင် ဗမာအစိုးရ၏ ဆင်လီတပ်၊ ကွတ်ခိုင် တပ်များနှင့် အောက်တိုဘာ (၂၉) ရက်နေ့ ညနေပိုင်း (၄း၃၀) နာရီခန့် အချိန်တွက် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိ ပါသည်။ ဤစစ်ပွဲတွင် ဗမာအစိုးရတပ်ဘက်မှ (၂) ဦးသေဆုံးပြီး၊ (၃) ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ဆက်လက် သိရှိရပါသည်။
ကေအိုင်အိုအစိုးရနှင့် ဗမာအစိုးရတို့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် ကြိုးစားချိန် လုံခြုံရေးကို အကြောင်းပြပြီး ကေအိုင်အေ ထိန်းချုပ် နယ်မြေများသို့ စစ်အင်းအား၊ လက်နက်အင်အားများ ပို့ဆောင် လျက်ရှိကြောင်း၊ ကေအိုင်အေဘက်မှလည်း ဗမာအစိုးရ၏ စိတ်ရင်း နှင့် ဗျုဟာများကို သိရှိပြီး ဖြစ်သောကြောင့် စစ်တပ်များကို အဆင်သင့် ပြင်ဆင်ထားကြောင်း စုံစမ်း သိရှိရပါသည်။
ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီနှင့် KIO ရွှေလီ၌တွေ့ဆုံစဉ်
ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် KIO ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့ရှိ ကျင်းချိန်ဟိုတယ်၌ ပြုလုပ်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ကေအိုင်အိုဘက်က ဦးဆွမ်လွတ်ဂွမ် ဦးဆောင် တက်ရောက်
မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ထွန်းထွန်းနောင်
ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ ဒု ဥက္ကဌ ဦးအောင်မင်း
အစိုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကော်မတီ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး KIO ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို ဦးဆွမ်လွတ်ဂမ်က ဦးဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲသို့ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ အထူးစစ်ဆင်ရေးမှူး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်စိုးတက်ရောက်ရန် မူလက စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း KIO/KIA အဖွဲ့မှ ဒုတိယ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော်တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း မရှိသဖြင့် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်စိုးလည်း တက်ရောက်ခြင်း မရှိပေ။
Posted by PNSjapan at 2:51 PM0comments
ရှမ်းပြည်တပ်မတော်SSA တောင်ပိုင်းခေါ် ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီRCSSနဲ့ အစိုးရအကြား မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးရာမှာ ဒေသတွင်း လုံခြုံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သဘောတူညီချက် မရတာကြောင့် ဆွေးနွေးပွဲဟာ မအောင်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ SSA တောင်ပိုင်းဖက်က အချက် ၁၀ချက် တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးအချက် ၂ချက်မှာ သဘောတူညီချက် မရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုတော့ ထိုင်းအခြေစိုက် သတင်းထောက် ကိုမိုးဇော်က တင်ပြ ထားပါတယ်။
ရှမ်းပြည် တပ်မတော်တောင်ပိုင်းလို့ လူသိများတဲ့ ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီRCSSနဲ့ အစိုးရကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ဟာ ဘိန်းအစားထိုးစိုက်ပျိုးရေးအတွက် စံပြစီမံကိန်းဖော်ဆောင်ဖို့ ဒီလ ၂၇ရက်နေ့ကစတင်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း တာချီလိတ်မြို့က မြိုတော်ခမ်းမမှာ ၂ရက်ကြာ ဆွေးနွေး ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ တိကျတဲ့ သဘောတူညီချက်တွေ မရခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတော့ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် တောင်ပိုင်းရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှုးစိုင်းလောင်ဆိုင်းက အခုလို ပြောပါတယ်။
”သဘောထားချင်း တိုက်ဆိုင်တာတွေတော့ရှိတယ်။ သဘောထားချင်း မတိုက်ဆိုင်တာတွေလည်း ရှိတယ်ဆိုတော့ မနေ့က ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးပွဲက အထမမြောက် တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲလို ဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျ။
29 October 23:48
T.N.L.A တအာင်းတပ်ဖွဲ့ တပ်ရင်း ၂၅၆ တပ်ဖွဲ့သည် ကျောက်မဲမြို့နယ် မိုင်းလုံအုပ်စုရှိ ပါလှိုင် ကျေးရွာတွင် မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် စည်းရုံးရေးအတွက် လူထုဆွေးနွေးပွဲကို ယနေ့ ၂၉ ရက် အောက်တိုဘာလ နံက် ၉ နာရီခန့်မှ နေ့လယ် ၁၁ နာရီခန့်ထိ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ထိုလူထုဆွေးနွေးပွဲသို့ ပါလှိုင်ကျေးရွာရှိ တအာင်းမိဘပြည်သူ သုံးရာနီးပါးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာများ၊ ဒေသခံပြည်သူ ရင်ဆိုင်နေရသည့် ပြဿနာများ တအာင်းတပ်ဖွဲ့နှင့်အတူ ပွင့်လင်း ရင်းနှီးစွာ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တအာင်းတပ်ဖွဲ့၏ နိုင်ငံရေးဦးဆောင်အဖွဲ့ဖြစ်သည့် ပလောင်ပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဦး မှချမှတ်သော
- တအာင်းဒေသအတွင်း ဘိန်းစိုက်ပျိုးခြင်းမပြုရ
- တအာင်းဒေသအတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်ခြင်းမပြုရ
ဟူသော လမ်းညွန်ချက်ကို ဒေသခံ မိဘပြည်သူများက တခဲနက်ထောက်ခံအားပေးခဲ့ကြပါသည်။ တအာင်းဒေသအတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် တအာင်းတပ်ဖွဲ့နှင့်အတူ လက်တွဲ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားရန်လည်း သဘောထားပေးကာ လက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ကြပါသည်။
TNLA ရဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး ခရီးစဉ်အတွင်း ရူခ်ုရ်ကျေးရွာမှ တအာင်း မိဘပြည်သူများက
Posted by PNSjapan at 2:39 PM0comments
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လက ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အကြမ်းဖက် ပဋိပက္ခများကြောင့် ဘေးလွတ်ရာ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေရသူများအား တွေ့ရစဉ်။ RFA
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်ကနေ ၂၆ ရက်နေ့ လောက်အထိ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုမှာ သေဆုံးသူ ၈၈ ဦး နဲ့ အိုးအိမ်တွေ စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးရသူပေါင်း နှစ်သောင်း ခြောက်ထောင်လောက် ရှိနေပြီလို့ ဒီကနေ့ အစိုးရက ထုတ်ပြန်ကြောင်း အေအက်ဖ်ပီ သတင်းမှာ ဖေါ်ပြပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ပေါက်တော ၊ ကျောက်ဖြူ၊ မင်းပြား၊ မြေပုံ ၊ ရသေ့တောင် စတဲ့ မြို့နယ်တွေမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မီးရှို့တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာ အိမ်ခြေ ရာပေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ပေါက်တောမြို့မှာ မနေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မီးရှို့တိုက်ခိုက်မှုမှာ အိမ်ခြေ အလုံးရေ ၃၀၀ မီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့လည်း
“ကျနော်တို့က ၆၀ မမနဲ့ ၁ ကြိမ်ပစ်တယ်။ အခုအချိန်က သူတို့ အခြေအနေကို ကြည့်ပြီး ကျနော်တို့ ပစ်တာ။ သူတို့လဲ ၁ ကြိမ် ပြန်ပစ်လာတယ်။ သူတို့ အမြောက်ဆံက ချုံထဲ ကျပေါက်ကွဲသွားတယ်။”
KIA တပ်ဖွဲ့မှ လက်နက်ကြီးဖြင့် အစိုးရတပ်အတွင်းအထဲသို့ ပစ်ခတ်ပေးခြင်းကြောင့် သေဆုံး ဒဏ်ရာ ရရှိမှုရှိနိုင်သော်လည်း အတိအကျမသိရကြောင်းပြောသည်။
ယနေ့ နံနက် မိုးမလင်းမီ ၂ နာရီချိန်နှင့် ၄ နာရီချိန်ကြားတွင်မူ မြန်မာအစိုးရ တပ်ဖက်မှ ခလရ ၁၀၅ ဆားမော်တပ်သည် KIA ထိန်းချုပ်နယ်မြေ လိုင်စင်ဘွမ်အနီး နာဖော့ တပ်စခန်းတွင် KIA တပ်ရင်း (၁၈) နယ်မြေ ကန်းဘွမ် (Kang Bum) သို့ စက်လက်နက်များဖြင့် ၂ ကြိမ် ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ညအချိန် ဘာတွေ့ပြီး ဘာတွေမြင်ပြီး ပစ်ကြတာလဲမသိဘူး။ ထင်ရာမြင်ရာ ရမ်းပြီးပစ်ကြတာ။” KIA တပ်ဖွဲ့မှပြောသည်။
မြစ်ကြီးနား-ဗန်းမော်လမ်း ၀ိုင်းမော်မြို့နယ် ဂန်ဒေါင်ယန် (Gangdau Yang) ရှိမြန်မာ အစိုးရတပ်သည် အောက်တိုဘာ၂၇ ရက် ည ၈ နာရီမှ ၁၀ နာရီထိ နမ်ဆန်ယန် (Nam San Yang) ကျေးရွာသို့ ၁၂၀ မမ အမြောက်များဖြင့် ၅ ကြိမ် ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၎င်းအစိုးရတပ်သည် နေ့ညအချိန်အခါမရွေး ၄င်းတို့ ထင်ရာမြင်ရာများသို့ လက်နက်ကြီးများဖြင့် နေ့စဉ်
အိမ်ရာဝင်းအတွင်း ဖွင့်ထားသော ဟိုတယ်ကြောင့် အနီးရှိပြည်သူများ အနှောက်အယှက် ဖြစ်လျက်ရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သာကေတမြို့နယ် အေးနန္ဒာအဆင့် မြင့်အိမ်ရာ စီမံကိန်းအပိုင်း(၁) အတွင်း ဖွင့်လှစ်ထားရှိသော ဟိုတယ်တစ်ခု အနေဖြင့် စီးပွားဖြစ်ဟိုတယ် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေခြင်းမျိုး မဟုတ်ပဲ။ ငယ်ရွယ်သူကျောင်းသား၊ ကျောင်း သူများ၊ စုံတွဲများနှင့် ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ကိုင်သော အမျိုးသမီးများသာ နေ့ညမပြတ် ၀င်ထွက်သွားကနေ သဖြင့် အနီးရှိ အိမ်ရာနေပြည်သူ များ သားကောင်းသမီးပျိုများ အတွက် များစွာ အနှောက်အယှက် ဖြစ်ခြင်း၊ အရှက်ရဖွယ်ရာများ နေ့စဉ်မြင်တွေ့နေရကြောင်း အိမ်ရာ နေပြည်သူတစ်ဦး၏ ပြောပြချက် အရ သိရှိရသည်။
“အဲဒီကြိုးကြာ ဟိုတယ်ကိုလာတဲ့ သူတွေက ဒီအိမ်ရာလမ်းကို သုံးနေတော့ အိမ်ရာထဲက လူကြီးလူကောင်းတွေ၊ သားကောင်း သမီးပျိုတွေအတွက် အများကြီး နစ်နာတယ်ဗျာ။ ပြီးတော့ သူ့ဟာက စီးပွားဖြစ် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းလို့သာ ပြောတယ်။ ကျောင်း သား၊ ကျောင်းသူ စုံတွဲတွေ၊ ပြည့် တန်ဆာတွေပဲ ဝေနတာ ဒီတော့ရွာနာတာပေါ့။ ပြီးတော့ပတ်ဝန်း ကျင်နဲ့ မသင့်လျော်တဲ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း တွေကိုလည်းတွေ့မြင်နေရတယ် ဗျာ။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အိမ်ရာမျက်နှာ စာတန်းက ခြံသုံး ခြံက ဟိုတယ်ဘက်ကိုဝင်တဲ့ အပေါက်အသေးကို ပိတ်ပြီး လမ်း မကြီးဘက်ကို ခြံဝင်းဝင်ပေါက် တိုက်ရိုက် ဖောက်လုပ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ စ၀ယ်ခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီကို အကြောင်းကြားပြီး ဒီကသားကောင်း သမီးပျိုတွေအတွက် တရားဝင်ပိတ် ခဲ့တယ်။ အဲဒါကို ကျွန်တော်တုိ့ အိမ်ရာက စီမံကိန်းအပိုင်း (၁) အဲဒါဘာမှ မဆိုင်တဲ့ အပိုင်း (၂) ကားလမ်း တစ်ဖက်ခြမ်းကလူတွေ ကို စည်းရုံးပြီး။ ဌာနဆိုင်ရာတွေ ကို လျှောက်တိုင် နေတယ်ဗျာ”ဟု
မြန်မာလူမျိုးတို၏ ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင် (သူတို.ပြောတာနော် အနော်တို.မပါ) တရုတ်သူခိုးကြီးအကြောင်း။
ဝမ်ကျားပေါင် ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်စဉ်ကာလအတွင်း သူ၏ ဆွေမျိုးသားချင်းများမှာ အလွန်အမင်း ကြွယ်ဝချမ်းသာ လာခဲ့ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၇ ဘီလျံကျော် ရှိနိုင်ကြောင်း
တနင်္လာံ၊အောက်တိုဘာ ၂၉၊ ၂ဝ၁၂ နယူးယောက်တိုင်းမ်၊ စီအင်န်အင်န်
တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ဝမ်ကျားပေါင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေစဉ် ကာလအတွင်း သူ၏ ဆွေမျိုးသားချင်းများမှာ အလွန်အမင်း ချမ်းသာ ကြွယ်ဝလာခဲ့ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု စုစုပေါင်းမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၇ ဘီလျံ အထိ ရှိနိုင်ကြောင်း နယူးယောက်တိုင်းမ် သတင်းစာ၏ စုံစမ်း ဖော်ထုတ် ရေးသားသည့် သတင်းတစ်ပုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယခုအခါ အသက် ၉ဝ ရှိပြီဖြစ်သော ဝမ်၏ မိခင်သည် တစ်ချိန်က ကျောင်းဆရာမ တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီး ဖခင်မှာ ဝက်ကျောင်းခဲ့ရသူ ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင် ဝမ်ကိုယ်တိုင်က သူ့ငယ်စဉ်ဘဝမှာ အလွန်အမင်း ဆင်းရဲခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ဖူးသည်။ ယခုအခါ ဝမ်၏မိခင် ယန်ကျီးယွမ်မှာ ဆင်းရဲတွင်း မှ လွတ်မြောက်ခဲ့ရုံ မျမက အလွန်အမင်း ချမ်းသာကြွယ်ဝလာခဲ့ကြောင်း နယူးယောက်တိုင်းမ်က ဘဏ္ဍာရေး မှတ်တမ်းများကို ကိုးကားပြီး ဖော်ပြထားသည်။
ယန်ကျီးယွမ်၏ အမည်ဖြင့် တရုတ်ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားမှုပင်လျင် လွန်ခဲ့သည့် ငါးနှစ်က အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၂ဝ မျှ တန်ဖိုးရှိသည်ဟု သိရသည်။ ယန်ကျီးယွမ်၏ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု မည်မျှရှိသည်ကို သူကိုယ်တိုင်သိရန်ပင် မသေချာသော်လည်း ယင်းကြွယ်ဝမှုများမှာ ဝမ်ကျားပေါင် ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်း ရရှိလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း နယူးယောက်တိုင်းမ်က ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဝမ်၏ သား၊ သမီး၊ ညီ၊ ယောက်ဖများ အပါအဝင် ဝမ်၏ဆွေမျိုးများသည် ဝမ် အာဏာရစဉ် ကာလအတွင်း အလွန်အမင်း ကြွယ်ဝလာခဲ့ကြသည်ဟု နယူးယောက်တိုင်းမ်က ဖော်ပြခဲ့သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုအများစု တွင် ဆွေမျိုးများမှာ နာမည်ခံထားခြင်းမရှိဘဲ မိတ်ဆွေများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် များ၊ စီးပွားရေးမိတ်ဖက်များနှင့် ပူးပေါင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသွင်ဖြင့် ရှိနေသည်ဟု နယူးယောက် တိုင်းမ် က ဖော်ပြခဲ့သည်။
တရုတ်ရှိ အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်များနှင့် မတူဘဲ ဝမ်၏ မိသားစုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ပတ် သက်သော လ
Posted by PNSjapan at 5:26 PM0comments
ရခိုင်အရေး ခေါင်းအေးအေး အဖြေရှာနိုင်ရင် အောင်မြင်နိုင်
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့ကို ဂြိုလ်တုမှ ရိုက်ကူးထားပုံနှင့်အပျက်အစီးကို HRW က ထုတ်ပြန်ထား
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး ခေါင်းအေးအေးထားပြီး အဖြေရှာနိုင်ရင် အောင်မြင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်နေရတာဟာ လူမျိုးရေးကြောင့်လည်း မဟုတ်သလို ဘာသာရေးကြောင့် လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တာလည်း မဟုတ်သလို လူမျိုးတုန်း သုတ်သင်နေတာ လည်း မဟုတ်ပါဘူး။
မူလ အကြောင်းရင်းကို ပြန်ကြည့်ရင် ဒေသခံ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ နယ်မြေတွေမှာ တဖက်နိုင်ငံက ဘင်္ဂလီတွေဟာ တရားမဝင် ခိုးဝင် နေထိုင် မွေးဖွားရင်းနဲ့ ပြဿနာတွေ ရှိလာကြပါတယ်။
နည်းမှန်လမ်းမှန် မဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ပြဿနာတွေဟာ ပိုမို ကြီးမား ရှုပ်ထွေး လာပါတယ်။ ဒီကြား ထဲမှာ ပိုမိုဆိုးဝါးလာစေတဲ့ အကြောင်းတခုကတော့ ခိုးဝင် နေထိုင် မွေးဖွားလာကြတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေဟာ ရိုဟင်ဂျာလို့ နာမည်အတပ်ခံရပြီး နိုင်ငံသစ် တည်ထောင်ချင်သူတွေရဲ့ အကြံအစည် အောက်မှာ အသုံးချ ခံလိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာ နာမည်တပ်ထားတာကို အကြောင်းပြုပြီး ဘင်္ဂလာဒက်ရှ် အစိုးရဟာ ရခိုင်နယ်မြေထဲ ရောက်နေ တဲ့ ဘင်္ဂလီတွေကို ရိုဟင်ဂျာ ဆိုပြီးတော့ သူ့နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ် မပြုသလို သူတို့ကို မကူညီနိုင် ဘူး လို့လည်း ဆိုလာပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဘင်္ဂလာဒက်ရှ် နိုင်ငံထဲမှာ အခြေစိုက်ပြီး မြန်မာတပ်မတော်ကို တိုက်ခိုက်နေတဲ့ Rohingya Solidarity Organisation (RSO) အဖွဲ့နဲ့ အခြား ဘင်္ဂလီအဖွဲ့တွေကို ဒီနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်း ထွက်ခွာဖို့
Posted by PNSjapan at 4:26 PM0comments
သတင်းထောက်များမေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားနေသော ပါတီပြောခွင့်ရ စိုင်းလိတ်
ယနေ့ကျရောက်သော သျှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ၂၄ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့တွင် အဖွဲ့ချုပ်မှ ကြေငြာချက်တစောင် ထုတ်ပြန်ရာ ပြည်ထောင်စုအမည်အား တိုင်းရင်းသား အမည်ဖျက်၍ အမည်သစ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းမည့် ပြည်ထောင်စု ပုံသဏ္ဌာန်ကို လက်မခံ၊ ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်သည်ဟု ပါတီပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်က ပြောသည်။
ကြေညာချက်တွင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမည်အား တိုင်းရင်းသား နာမည်ဖျက်၍ ကမ္ဘောဇ၊ ရာမည၊ ကန္တရ၀တီ၊ ဥတ္တရသီရ၊ ဇေယျာသီရိ အစ ရှိသည့် နာမည်ဖြင့်အစားထိုးကာ ၁၄ ၊ ၁၅ ပြည်နယ်ခွဲပြီး ပြည်ထောင်စု အသစ်ထပ်မံ တည်ဆောက်မည်ဆိုပါက လုံးဝလက်ခံ မည် မဟုတ်။ ၈ ပြည်နယ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းသော ပြည်ထောင်စုဆိုပါက လက်ခံနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း စသည့် အချက်များ အပါအ၀င် အဓိက အချက် ၈ ချက်ပါဝင် သည်ဟု စိုင်းလိတ်ကပြောသည်။
“ဒီမိုကရေ စီမိတ်ဆွေ ၁၀ ပါတီက ထုတ်ပြန်တဲ့ ၁၄ ပြည်နယ်ပါ ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်နေလား လို့မေးလာရင် အဲတာကို အဓိကပြောချင်တာဘဲလို့ဖြေရပါလိမ့်မယ်။ ၁၉၄၇ အရဆိုရင် ဗမာအပါအဝင် တိုင်းရင်းသားတွေ တယောက်တကျပ်စီ ဘဲရှိရမယ်လေ။ အခုက တိုင်းရင်းသားတွေ တယောက်တကျပ်ရနေပြီး ဗမာက ၇ ကျပ်ရနေတာတော့ ကျနော်တို့ လက်မခံနိုင်ဘူး။ အဲတာကြောင့် ၁၄
စစ်တွေမြို့သို့ ပေါက်တော နယ်မှ တိမ်းရှောင် နေသူများ ရောက်ရှိ နေပြီဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။တောလယ်နှင့် ဂြင်းချောင်း ကျေးရွာများမှ ဒေသခံ များသည် နေအိမ်များကို စွန့် ခွါကာ စစ်တွေမြို့လို့ လာရောက် တိမ်းရှောင် နေမှုများ ရှိနေသည်။
ဘင်္ဂလီများ ၏ ရန်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် နေအိမ်များကို စွန့်ခွါကာ ထိုသို့ ထွက်ပြေး လာကြ ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
တစ်ချို့မှာ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းများတွင် ခိုလှုံနေကြပြီး တစ်ချို့မှာ ဆွေမျိုး များရှိရာနေရာများသို့
Posted by PNSjapan at 11:05 PM0comments
ဗြိတိသျှတို့က မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ အကောင်းတိုင်း အစိတ်အပိုင်းလိုက် မြှုပ်နှံထားခဲ့တဲ့ စပစ်ဖိုင်းယားတွေကို ပြန်လိုချင်ပါသတဲ့ ။အခုမှသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တော့ အံများတောင်သြပါရဲ့ ။လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂ နှစ်ကျော်ကတည်းက ရှာဖွေနေခဲ့ပါသတဲ့ ။အခု မြှုပ်နှံခဲ့တဲ့ စစ်သားဟောင်းတွေရဲ့ မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေနဲ့ apple ရဲ့ နည်းပညာတွေ ပေါင်းစပ်ရှာဖွေမှုနဲ့ လေယာဉ်းအစင်း ၂၀ ကျော် ကို ပြန်တူးပြီး အကောင်းတိုင်း ပြန်ယူတော့မယ်တဲ့ ။
ကျွန်တော်တို့ သဘောကတော့ မပေးရဘူး ။ဘာကြောင့်လဲ ။ ဒီလေယာဉ်တွေဟာ ဗြိတိသျှ သမိုင်းတင် မဟုတ်ပါဘူး ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသမိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမြေအောက်မှာ နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော် အိပ်စက်နေခဲ့တာပါ ။ကျွန်တော်တို့လည်း ပိုင်တယ် ။ဒီလေယာဉ်တွေကို တူးဖော်ခွင့် ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ခိုင်မာစေမှာလို့ ဒေးဗစ်ကင်မရွှန်းကပြောတယ် ။ဟုတ်ပြီ ။ဒီလေယာဉ်အစင်း၂၀ ပြန်ပေးမှ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှာလား ။ဒါဆိုရင် ဘဲစားဘဲခြေ လေး ကစားကြည့်ရအောင် ။ ကျွန်တော်တို့ဆီက သမ သွားတဲ့ ပတ္တမြား ငမောက်ကြီး ဘယ်ရောက်နေတုန်း ။
ကိုင်း ... ဒီစာရင်းထဲက နန်းစဉ်ရတနာတွေ ပြန်ပေးမလား ။
၁။ သက္ကရာဇ် ၁၀၃၂ (အေဒီ ၁၆၆၁) လောက်ကတည်းက ရှိခဲ့တဲ့ အလေးချိန် ရတီကိုးဆယ်ကျော်ရှိသော ပတ္တမြား ငမောက်
၂။ ဗဒုံမင်းလက်ထက်ကတည်းက ရှိခဲ့တဲ့ ရတီချိန် နှစ်ဆယ်ခန့်ရှိတဲ့ လှော်ကားတင်ကလေး ဟုခေါ်သော ပတ္တမြား
၃။ သက္ကရာဇ် ၁၁၉၉ (အေဒီ၁၈၃၇) ခုနှစ် ရွှေဘိုမင်းလက်ထက်ကတည်းက ရှိခဲ့တဲ့ ရတီချိန်လေးဆယ်ကျော် လှော်ကားတင်ကြီး ဟုခေါ်သော ပတ္တမြား
၆။ စံထားအသုံးပြုရတဲ့ အချိန်ခြောက်ရတီရှိတဲ့ စံကျောက်တော် ဟုခေါ်သော ပတ္တမြား ပြီးတော့
Posted by PNSjapan at 6:46 PM0comments
မိုးထိမိုးမိ ရွှေလုပ်သားများ အရေး ယခုတိုင် ပြေလည်မှု မရ...
Photo by - mizzima
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်း ခရိုင်၊ မိုးထိမိုးမိ ရွှေတွင်း လုပ်သားများ အရေးနှင့် ပက်သက်၍ နိုင်ငံ ပိုင် သတင်းစာများ နှင့် မီဒီယာ များတွင်ဖော်ပြ နေသကဲ့သို့ ပြေလည်မှု ရရှိသည် ဆိုသည်မှာ မဟုတ်ကြောင်း အဆိုပါ ဒေသခံ အလုပ်သမား များက မီဒီယာ များ သို့ ပြောကြားသည်။
၄င်းတို့ အင်းပိုင်ရှင်များ အနေဖြင့် အမျိုးသား ကြီးပွား တိုးတက်ရေး ကုမ္မဏီနှင့် စမ်းသပ် ကာလ ၆ လ လက်တွဲ ၍ အလုပ် လုပ်ခဲ့ရာမှ ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၂ ရက်နေ့ တွင် ခြောက်လ သက်တမ်း ကုန်ပြီဖြစ်သောကြောင့် ယခု အစု စား မဟုတ် တော့ပဲ ကုမ္မဏီလခစား အဖြစ် အလုပ်လုပ် နိုင်သည်ဟု ယင်းကုမ္မဏီက အကြောင်း ကြားလာ ခဲ့ကြောင်း ၊မိမိ တို့ သွေး၊ ချွေး များဖြင့် ရင်းနှီး၍ စိုက်ပျိုး ထားသော အသီးအပွင့် ကို ပိုက်ဆံပေး ၍ ဝယ်စားရသော အဖြစ် မျိုး မလိုချင် ကြောင်း အင်းပိုင်ရှင် တစ်ဦးဖြစ်သူ
ဆေးရုံရောက် သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရ သွေးချင်း ညီအကို ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ...တရုတ် ရုပ်သံဖိုင်မှ သတင်း
Wai Yan De Mo အင်တာနက်စာမျက်နှာမှ ကူးယူခဲပါသည်။
ရခိုင်- ရွာလုံးကျွတ် မီးရှို့မှုများရှိကြောင်း မြန်မာအစိုးရ နိုင်ငံတကာ မီဒီယာသို့ ပထမဆုံးအကြိမ် ၀န်ခံပြောကြား
Digital Globe ဂြိုလ်တု ဓာတ်ပုံတွေ ထုတ်ပြန်
လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်မှုအဖွဲ့ (HRW) ၏ ဂြိုလ်တုပုံများ ထွက်ပေါ်လာအပြီး မြန်မာသမ္မတ၏ ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် ဦးဇော်ဌေးက ရခိုင်ပြည်နယ် တွင် အကြီးအကျယ် ပျက်ဆီးမှုများ ရှိခဲ့ကြောင်း ဘီဘီစီသို့ ၀န်ခံ ပြောကြား လိုက်သည်။
“ရွာလုံးကျွတ် ဒါမှမဟုတ် မြို့ရဲ့ အချို့အစိတ်အပိုင်းတွေ မီးလောင်ပြာကျခဲ့တာမျိုးတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်” ဟု ဦးဇော်ဌေးက ပြောကြားသည်။ ထိုသို့ဝန်ခံပြောကြားမှုမှာ ကျောက်ဖြူ တစ်မြို့ထဲတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အဖြစ်အပျက်များ၏ ဓာတ်ပုံများကို HRW ဖော်ပြခဲ့အပြီး နောက်တွင်မှ ဖြစ်ကြောင်းကို ဘီဘီစီက
တရုတ် သံရုံး၏ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ခြေရှုပ်မှုများ - အပိုင်း (၂)
အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂.၇ ဘီလျှံ ကျော် ချမ်းသာ ကြွယ်ဝသည့် တရုတ် ၀န်ကြီးချုပ် ၀မ်ကျားပေါင်၏ ဇနီး ဖြစ်သူ ကျန်ပိုင်လီ သည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ တရုတ်သံရုံး ၊ မန္တလေးမြို့ရှိ တရုတ် ကောင်စစ်ဝန်ရုံး တို့မှ တစ်ဆင့် ကချင် ပြည်နယ်မှ ထွက်ရှိသော ကျောက်စိမ်းများကို သံတမန် ကင်းလွတ်ခွင့် အပါအ၀င် နည်းမျိုးစုံ ဖြင့်ဝယ်ယူ၍ နယူးယောက် ၊ ပါရီရှိ ကျောက်စိမ်းနှင့် လက်ဝတ် လက်စား ဈေးကွက်သို့ ပြန်လည် ရောင်းချသည်။
ကျန်ပိုင်လီ သည် ပီကင်း ကျောက်စိမ်းနှင့် လက်ဝတ်ရတနာ ကုမ္ပဏီ၏ ဥက္ကဌ ၊ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် လည်းဖြစ်ပြီး တရုတ် ကျောက်မျက် ရတနာအသင်း၏ ဒုဥက္ကဌ လည်းဖြစ်သည်။ ကျန်သည် ဘူမိဗေဒ ပညာရှင် တစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ ကျောက်စိမ်းနှင့် စိန်ကို အထူး ကျွမ်းကျင်သည်။
တရုတ် သံရုံး၏ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ခြေရှုပ်မှုများ- အပိုင်း (၁)
Posted by PNSjapan at 10:27 AM0comments
အောက်တိုဘာလ 26 ရက် 2012 ခုနှစ်။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အစိုးရနှင့် ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO နှစ်ဖက် ကိုယ်စားလှယ်တို့ တရုတ်ပြည် ရွှေလီမြို့တွင် ထပ်မံ တွေ့ဆုံရန် သဘောတူညီမှု ရထားကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသော်လည်း ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲများ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေဆဲ ဖြစ်သည်။
ဒေါ့ဖုန်းယန် အခြေစိုက် အစိုးရ၏ ခြေလျင်တပ်ရင်း ခလရ (၁၄၂) မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ လိုက်ပါလာသည့် ကား(၁) စီးအား KIA တပ်မဟာ (၅) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း (၂၄) မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များက အောက်တိုဘာလ၂၃ ရက်နေ့က မိုင်းခွဲ တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ အစိုးရတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ထိခိုက်ကျဆုံးမှု ရှိခဲ့သည်ဟု ရှေ့တန်းရှိ KIA အရာရှိတဦးက ပြောသည်။ “ကားက အားလုံး ပျက်စီးသွားတယ်။ အယောက် ၂၀ ကျော်လောက်
တပ်ပေါင်းစုနှင့်မြန်မာစစ်တပ် တိုက်ပွဲတွင် မြန်မာတပ်ဖွဲ့ ၃ ဦးကျဆုံး၊ ၈ ဦးဒါဏ်ရာရ
၂၇ ရက်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၀၁၂ ခုနှစ်။
တိုင်းရင်းသားတပ်ပေါင်းစု စစ်ကြောင်းနှင့် မြန်မာတပ်ဖွဲ့ ခမရ ၅၀၁၊ ခလရ ၁၄၄ တပ်ဖွဲ့တို့သည် နမ့်ခမ်းမြို့နယ် စယ်နေနှင့် ဖာပြင် ကျေးရွာအကြားတွင် ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံပြီး ၂၇ ရက် အောက်တိုဘာလ ၂၀၁၂ ခုနှစ် နံနက် ၉ နာရီ ခန့်မှ စတင်ကာ နေ့လည် ၂ နာရီခန့်အထိ ပြောက်ကျားတိုက်ပွဲငယ်များ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြပြီး မြန်မာတပ်ဖွဲ့မှ အနည်းဆုံး ၃ ဦးကျဆုံးပြီး ၈ ဦး ဒါဏ်ရာ ရရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
တိုက်ပွဲ ပစ်ခတ်သံများ ငြိမ်သက်သွားပြီးနောက် ညနေပိုင်းအချိန်တွင် ဒါဏ်ရာ ရရှိသူများကို မိုင်းဝီး ဆေးရုံသို့ သယ်ဆောင်လာပြီး ဆေးကုသမှု ခံယူနေသည်ဟု ဒေသခံများ ပြောကြားချက်အရ သိရှိရပါသည်။
K.I.A, S.S.P.P / S.S.A နှင့် T.N.L.A တို့ပါဝင်သည့် တိုင်းရင်းသား တပ်ပေါင်းစုသည် ထိုဒေသတခွင်တွင် နယ်မြေ စိုးမိုးရေးအတွက် စည်းရုံးလှုပ်ရှားစဉ် မြန်မာတပ်ဖွဲ့နှင့် ထိပ်တိုက်ရ င်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ကြခြင်း
ကေအဲန်ယူ၏ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး(၁) ဗိုလ်မှူးစောလှငွေက “ထုတ်ပယ်ခံရတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကိစ္စကို ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ သူ့ ဘက်က သူမှန်၊ ကိုယ့်ဘက်က ကိုယ်မှန်နဲ့ အပြန်အလှန် ပြောဆိုလို့ မဆုံးနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးကို ရှေ့ရှုပြီး သင်ပုန်းချေလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပဲဆိုပြီးတော့ အဲဒီခေါင်းဆောင်တွေကို မူလ တာဝန်ပြန်ပေးပြီး ၁၅ကြိမ်မြောက် ကွန်ဂရက် အထိ ဆက်လက် တာဝန်
Posted by PNSjapan at 8:31 PM0comments
ပုသိမ်မြို့နယ်မှ NlD ပါတီဝင် ၁၃၂ဦးနုတ်ထွက်ပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီကွန်ရက်အဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်သွားမည်
ပုသိမ်မြို့နယ် NLD ပါတီမှ ပါတီဝင် ၁၃၂ ဦးမှာ အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ပါတီဝင်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက် ခဲ့ကြပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ ကွန်ရက်အဖြစ် ဆက်လက် ရပ်တည်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နုတ်ထွက် ခဲ့ကြသည့် ခေါင်းဆောင်များက ပြောကြားသည်။
“အခြားပါတီကို ခိုလှုံချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး ၊ အမေမရှိခိုက် ဦးကြီး ဘထွေးတွေက နှိပ်စက်တော့ မနေနိုင်လို့
အပြင်ထွက် နေရတဲ့ သဘောပါ၊” ဟု NLD ပါတီမှ နုတ်ထွက်ခဲ့သူ ဦးသန်းဝင်းက ဆိုသည်။ အဆိုပါ ပါတီဝင် ၁၃၂ ဦးနုတ်ထွက်ခြင်းနှင့် အတူ ပုသိမ်မြို့နယ် ပါတီရုံး၏ ဆိုင်းဘုတ် ပိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် ပါတီအလံ
- အရိုးကို သန်မာစေသည်။
- နှလုံးကို ကာကွယ်ပေးသည်။
- အဆစ်အမျက်ရောင်ရမ်းခြင်းကို သက်သာ လျော့ပါးစေသည်။
- သွေးပေါင်ချိန်ကို ထိန်းပေးသည်။
Posted by PNSjapan at 7:05 PM0comments
တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ် Wen Jiabao
New York Times သတင်းစာမျက်နှာမှာ တရုတ် ၀န်ကြီးချုပ် Wen Jiabao မိသားစုရဲ့ ကျိကျိတက်ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု သတင်းအသေးစိတ်ကို ဖော်ပြတဲ့ သတင်းပါပြီးတဲ့နောက် ၊ သောကြာနေ့ကတော့ New York Times အင်တာနက်စာမျက်နှာကို တရုတ်အစိုးရ စာပေစိစစ်ရေးအဖွဲ့က အမြန်ဆုံးပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီသတင်းကြောင့် ရိုးသားပြီး စာနာတတ်သူ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားကြီး လို့ ပြည်သူတွေသိထားကြတဲ့ တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ ပုံရိပ်ခြိမ်းခြောက်မဲ့ အန္တရာယ် ရှိနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
New York Times သတင်းအရ ၀န်ကြီးချုပ် Wen ရဲ့ ဆွေမျိုးတွေဟာ ဒေါ်လာ ၂.ရ ဘီလီယံထက် မနည်း ကြွယ်ဝကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီသတင်းဖော်ပြအပြီး နာရီအနည်းငယ်အတွင်းမှာဘဲ တရုတ်နိုင်ငံတ၀ှမ်း
အမေရိကန် အစိုးရအဖွဲ့ ကရင်နီပြည်နယ်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် လာရောက်လေ့လာ
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ဒုဝန်ကြီးနှင့် သံအမတ်တို့ KNPP အဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တို့ လွိုင်ကော်မြို့ ဆက်ဆံရေးရုံးတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေကြစဉ် (ဓါတ်ပုံ-ကေတီ)
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဒုဝန်ကြီးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်တို့ ကရင်နီ(ကယား)ပြည်နယ်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကို သိရှိနိုင်ဖို့ လွိုင်ကော်မြို့သို့ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ လာရောက် တွေ့ဆုံ သွားပါတယ်။
လွိုင်ကော်မြို့သို့ လာရောက်ရခြင်းရဲ့ ပထမဆုံး အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က လူထုတွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ကိုင် သွားလာနိုင်ဖို့ မြေမြုပ်မိုင်းတွေ ရှိနေတဲ့ နေရာတွေကို ဖော်ထုတ်ရှင်းလင်း နိုင်ရေး ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ နိုင်ငံခြားရေး ဒု-ဝန်ကြီး Jerry White က ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) ပြောပါတယ်။
“အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လုပ်ထားပြီး တဲ့နောက်မှာ ဘယ်လိုတွေ တိုးတက်မှုရှိ ထားသလဲဆိုတာ ကြည့်ဖို့ရယ် နောက် ပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ဆက်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက် တဲ့အခါမှာ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားတဲ့ ဒီမိုင်းရှင်းလင်းရေး လုပ်ငန်းကို အခြေပြု ပြီးတော့ ရှေ့ဆက် လက်တွဲပြီးတော့ ဒီငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဘယ်လို လုပ်သွားမလဲဆိုတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ကိုလာပြီး ဆက်သွယ်ချင်လို့ပါ” လို့ ပြောပါတယ်။
လွိုင်ကော်မြို့မှာရှိတဲ့ ကရင်နီအမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP) အဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ယမန်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့စဉ်က မြေမြုပ်မိုင်း ရှင်းလင်းဖို့ကိစ္စတွေ ဆွေးနွေးသွားကြတာပါ။
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ဒုဝန်ကြီးနှင့် မြေမြှပ်မိုင်းကြောင့် ဒဏ်ရာရခဲ့သော သူများနှင့် အတူတကွမှတ်တမ်းဓတ်ပုံရိုက်နေကြစဉ် (ဓါတ်ပုံ-ကေတီ)
မိုင်းရှင်းလင်းဖို့အတွက်ကို အစိုးရနဲ့ မတ်လ ၇ ရက်နေ့က ပြည်နယ်အဆင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့စဉ်က အစိုးရဘက်မှ စက်တင်ဘာလ မတိုင်ခင်မှာ ရှင်းလင်းဖို့ ပြောဆိုထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မှာ မလုပ်ဖြစ်ဘူးလို့ လွိုင်ကော်မြို့မှာရှိတဲ့ KNPP ဆက်ဆံရေး ရုံးတာဝန်ခံ ခူဒယ်နီယာက အမေရိကန်အစိုးရရဲ့
Posted by PNSjapan at 6:36 PM0comments
အခုအချိန်ဟာ မည်းမည်းမြင်ရာကို တိုက်ရမယ့် အချိန်မဟုတ်ပါဘူး။ တိုင်းပြည်ကို တည်ဆောက်ရမယ့် အချိန်ပါ။ တိုက်စရာရှိရင် ကျွန်တော်တို့ပဲ တိုက်ပါ့မယ် ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘဝ လက်ကျန် အချိန်တွေဟာ သိပ်လွမ်းစရာ မရှိတော့ပါဘူး။
နောင် မ်ျိူးဆက်တွေကို ကဒေါင်းတွေပဲ ဖြစ်စေချင်တယ်။ တွန်စေချင်တယ်။ ကစေချင်တယ်။ အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ကံရဲ့ ဒီဇိုင်းကို ရေးဆွဲတဲ့ ဗိသုကာကောင်းတွေ ဖြစ်စေချင်တယ်။ သူတို့ နောက်က ကျွန်တော်တို့ လိုက်ပါ့မယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်ညီ ညီမတွေက ကျောင်းသား သမဂ္ဂတွေဖွဲ့ တည်ဆောက်ရေး ပညာတွေကို ရအောင်သင်ပါ။
နိုင်ငံတကာမှာ သူများကျောင်းသားတွေ တည်ဆောက်ရေးပညာ သင်နေကြတဲ့ အချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံက ကျောင်းသားတွေ ခွပ်ပြီးတော့ ထောင်တွေထဲကို ရောက်ရမယ့် အဖြစ်မျိုး မလိုလားပါဘူး။ အစ်ကိုတို့ ကိုယ်တိုင် အဲဒါတွေကို ရင်ဆိုင်ပါ့မယ်။ လိုအပ်လို့ ရှိရင်ပေါ့ ကျွန်တော့်ညီ ညီမတွေက ကျောင်းသား သမဂ တွေ တည်ထောက်ပါ။ ကနိုင် တွန်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ
First Weekly မှဖော်ပြပါသည်။
Aung Thu Ra , အင်တာနက်စုမျက်နှာမှ
အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်။
ကချင် လူငယ်များအကြား နိုင်ငံရေးနှင့် အမျိုးသားရေးအသိ ပိုမို နိုးကြားလာစေရန် အတွက် နိုင်ငံတကာရောက် ကချင်လူငယ်များ ကွန်ဖရင့်တရပ်ကို မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလာလမ်ပူမြို့တွင် ကျင်းပနေကြောင်း သိရှိရသည်။
၃ ရက်တာ ကျင်းပမည့် အဆိုပါ ‘One Kachin Youth Conference’ (တစုတည်းသော ကချင် လူငယ်ကွန်ဖရင့်)ကို ကြာသပတေးနေ့က စတင်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်၊ စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား၊ အင်္ဂလန်နှင့် မြန်မာပြည်တွင်းမှ ကချင်လူငယ် ၄ဝဝ ကျော် တက်ရောက် နေကြသည်ဟု ကွန်ဖရင့် ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ ကိုမရှော့ မုန်နန်လ က ပြောသည်။
“ဒီမှာရှိတဲ့ လူငယ်တွေကို နိုင်ငံရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနဲ့ လူငယ် အချင်းချင်း တွေ့ဆုံ ဖလှယ်ကြ တာပါ။ ခုဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး ပြဿနာတွေအပေါ် မိမိတို့ အတွေ့အကြုံတွေကို ဖလှယ်ကြတယ်။ ရှေ့ဆက်ပြီး ဘယ်လို ရပ်တည်သွားမယ်။ နိုင်ငံရေးပြဿနာကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းနိုင်မလဲ ဆိုတာတွေ
တူရကီ C-130 လေယာဉ် ၂ စင်း ဘာကြောင့် မြန်မာပြည်ရောက်နေသလဲ ?
တူရကီ C=130 စစ်သုံး လေယာဉ်တစီး၊ ဓာတ်ပုံ- flickr.com
တူရကီ နိုင်ငံက စစ်လေယာဉ် ၂ စီး ရောက်ရှိနေသည့်အပေါ် သမ္မတ ရုံ့း ညွှန်ကြားရေးမှူး ( ဖေ့စ်ဘုတ် အမည် မှူးဇော်)၏ စာမျက်နှာတွင် အသိပေး ကြေညာထားပါတယ်။
အဆိုပါ လေယာဉ် ၂ စီး ဆိုတာ C- 130 လေယာဉ်များဖြစ်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း ဒုက္ခခံစားနေရတဲ့ လူမျိုး၊ ဘာသာမရွေး ကူညီထောက်ပံ့မှုများအတွက် ထောက်ပံ့ ပစ္စည်းတွေ သယ်လာတဲ့ လေယာဉ်တွေ ဖြစ်တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
အဆိုပါ လေယာဉ်ကြီးတွေနဲ့ သယ်ဆောင်လာတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ယနေ့ အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ မှာ စစ်တွေကို အစိုးရ ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ လေကြောင်း ချာတာများဖြင့် အနည်းဆုံး ၃ ခေါက် သယ်ပို့ရမယ် လို့ ရေးသား ထားပါတယ်။
"(၄) စုစုပေါင်း တန်ချိန်(၃၀) အလေးချိန်ရှိသော စားသောက်ကုန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်- -
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အကြမ်းဖက် ဆူပူမှုတွေ အပေါ် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အနေနဲ့ အထူး စိုးရိမ် ပူပန်မိကြောင်းနဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေ တွေဟာ ခက်ခဲ ရှုပ်ထွေးနေ ပေမယ့်လည်း အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အနေနဲ့ မြန်မာ အာဏာပိုင် တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး နည်းလမ်းပေါင်းစုံက ပြေလည်အောင် စီစဉ် ဆောင်ရွက် နေတယ်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရ အမျိုးသမီး Victoria Nuland က ကြာသပတေးနေ့က ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ အတွင်း ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
“ သူပြောသွားတာကတော့ - မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အကြမ်းဖက် ဆူပူမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီဒေသမှာ အခုသီတင်းပတ်အတွင်း လူမျိုးရေးနဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေ ထပ်မံ ဖြစ်ပွားတယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်လာတဲ့အပေါ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ အထူးပဲ စိုးရိမ် ပူပန်မိကြောင်း၊ ဒီအကြမ်းဖက် ဆူပူမှုတွေကို ၂ ဖက်စလုံးက ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းကြဖို့နဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေ ချက်ချင်း ရပ်တန့်ကြဖို့ တောင်းဆိုကြောင်း၊ နောက် အစိုးရအပါအ၀င် လူမှုရေးနဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်း ဒီ ဆူပူ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ချက်ချင်း ရပ်တန့်ဖို့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းဝိုင်းနဲ့အတူ တောင်းဆိုကြောင်း၊ ဘေးဒုက္ခသင့်သူတွေကို အကူအညီပေးရေးအတွက်လည်း လူသားချင်း စာနာထောက်ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ ချက်ချင်း ၀င်ရောက်ခွင့်ပြုဖို့ တောင်းဆိုကြောင်း Victoria Nuland က သတင်းထောက်တွေရဲ့
OIC ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဟာ ပထမ အဆင့်အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု ခြေကုပ်စခန်း တခုကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာလုပ်တာပဲလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူထုက တောင်းဆို ဆန္ဒပြတဲ့အတိုင်း OIC ခြေချခွင့် မရတော့ပါဘူး။ ပထမ အဆင့်မှာပဲ OIC တပ်လှန် သွားပါပြီ။ မြန်မာပြည်သူလူထုနဲ့ အစိုးရရဲ့ အမြော်အမြင် ကြီးမားမှုကြောင့်၊ အရေးကြီးရင် သွေးစည်း ကြတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်း တည်ငြိမ်စွာ အဓွန့်ရှည်ရေးအတွက် နောင်လည်းပဲ အရေးကြီးဆုံး မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက် ဖြစ်နေပါဦးမယ်။
OIC ခြေချဖို့ အခွင့်အလမ်း ဘယ်တော့မှ မရှိနိုင်ဘူး ဆိုပေမယ့် OIC ဟာ သူတို့ရဲ့ အလုပ်တွေကို ရပ်နားထားလိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ကျနော်တို့ အပိုင် တွက်ဆထားရပါမယ်။ သူတို့ဟာ အခြား နည်းလမ်းတွေကို ကြံစည်ပြီးတော့ လုပ်လာနေဦးမှာ ကြိမ်းသေပါပဲ။ OIC ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဟာကွက် တွေကနေ နောက်ထပ် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ထိုးဖောက်နေဦးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ယခုလက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ခိုးဝင်သူ ဘင်္ဂါလီများ၏ အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းနေမှုများသည် မြန်မာနိုင်ငံ တွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကာလတွင် လူမျိုးသစ် တခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံ ရရေးအတွက် ကြိုတင်စီစဉ် အကွက်ချ လုပ်ဆောင် နေသည့် တဖက်နိုင်ငံမှ ခိုးဝင်သူ ဘင်္ဂါလီမူဆလင်များနှင့် ၄င်းတို့ကို အားပေး အားမြှောက် ပြုနေ သည့် နိုင်ငံ များနှင့် အကြမ်း ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ရပ်သာဖြစ်သည်။
၂။ ရခိုင်လူမျိုးများအား တမြေတည်းနေ တရေတည်းသောက် ညီနောင် တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အမှန်တကယ် သတ်မှတ် ပါက မိမိတို့၏ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်ပိုင်နက်နယ်မြေကို ဘင်္ဂါလီများလက်တွင်းသို့ မကျရောက်ရေး အသက်ပေးကြိုးပမ်းနေ သည့် ရခိုင်တို့၏ လုပ်ရပ်အား မြန်မာအုပ်ချုပ်သူအစိုးရနှင့် မြန်မာပြည်သူတရပ်လုံး
အနေဖြင့် ရခိုင်တို့နှင့် လက်တွဲပူးပေါင်း ပါဝင် သင့်သည်။
၃။ ယခုဖြစ်ပေါ်နေသည့် ဘင်္ဂါလီမူဆလင်များ၏ အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းနေမှုများကို လက်ရှိအစိုးရ အနေဖြင့် နိုင်နင်းစွာ ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်ရမည့်အစား မိမိတို့ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် ပိုင်နက်နယ်မြေကို အသက်ပေးကာကွယ်နေသည့် ရခိုင်တို့ အား မြန်မာစစ်တပ်မှ မတရားပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်နှိမ်နင်းနေခြင်းများ သည် မြန်မာ အစိုးရမှ ကြွေးကြော်နေ သည့် ပြည်ထောင်စု ဖွား တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း ရိုင်းပင်း
နိပွန် ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဦးဆောင်၍ “Conference on Emergency Humanitarian Aid to Myanmar Ethnic Groups” ကွန်ဖရင့်ကို အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့က ဂျပန် နိုင်ငံ၌ ကျင်းပခဲ့ရာ တက်ရောက်လာကြသည့် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်များအား တိုကျိုမြို့၌ တွေ့ရစဉ်။ (ဓါတ်ပုံ - NMSP)
အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်။
နောက်ထပ်လည်း ထပ်မံ ပေးသွားဖွယ်ရှိကြောင်း ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ပြီး နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် ကွန်ဖရင့်တရပ် ပြုလုပ်ကာ ဆွေးနွေးခဲ့သည့် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာ က ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်ရောက်လာစဉ် ထုတ်ဖော် ပြောကြား လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“တိုင်းရင်းသားဒေသ အားလုံးအတွက် ဒေါ်လာ ၃ သန်းဖိုးတန် ဆန်နဲ့ဆေးဝါး အကူအညီတွေကို ပထမအသုတ် စပေးသွားပါမယ်။ အဲဒါကလည်း သူတို့ကိုယ်တိုင် လိုက်ပို့ပေးမှာပါ။ အဲဒါ အဆင်ပြေရင်တော့ နောက်ထပ် တိုးပြီး ပေးသွားဖို့ ရှိပါတယ်” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
အောက်တို ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့က နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဦးဆောင်၍ “Conference on Emergency Humanitarian Aid to Myanmar Ethnic Groups” ကို ဂျပန်နိုင်ငံ၌ ကျင်းပခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း ၂၂ ဦး တက်ရောက်ကာ ၎င်းတို့၏